Owesifazane uhlaselwe yisifo esingaziwa seminyaka ye-10, abasebenzi bathola ukuthi udle ubuthi - Thumela RELAY
Accueil » IMPILO YAMI Owesifazane uhlaselwe yisifo esingaziwa seminyaka ye-10, abasebenzi bathola ukuthi wayenobuthi
Owesifazane uhlaselwe yisifo esingaziwa seminyaka ye-10, abasebenzi bathola ukuthi unobuthi
Umuthi wesimanje kungenzeka uthuthuke kakhulu, kepha lokho akusho ukuthi odokotela banezimpendulo zayo yonke into. Iziguli eziningi azitholakali kahle kanti ezinye zazo ziyabaphazamisa ochwepheshe abanezimpawu zabo ezingaqondakali.
Abantu bangahlala izinyanga ngisho iminyaka bengazi ukuthi yini inkinga ngabo. UKathi Wilson, 41, wase-Indiana, wayengomunye wabo.
Ngesikhathi seminyaka emide ye-10, uKathi Wilson wahlaselwa yisifo esamenza wazizwa ekhathele ngokweqile. Owesifazane osemusha weminyaka ye-41 akakwazanga ukuhamba kahle, kwakudingeka asebenzise nomhlanga.
Izimpawu zakhe, ezazihlanganisa nobuhlungu bemisipha kanye nokungajabuli, zazikhula ngokuhamba kwesikhathi futhi akekho owayenombono wokuthi ngabe yini inkinga ngaye.
Udokotela kaWilson wadideka ngoba wayengaqondi ukuthi kungani isiguli sakhe sizizwa sigula kangaka. UKathi uzame imishanguzo eminingi, kepha akukho okusize. Wayekulungele ukudela kuze kube yilapho iqembu labakhi bezindlu lisindisa impilo yakhe.
Izisebenzi, ebeziqashe ukuvuselela igumbi lokugezela labesifazane, zithole ukuthi i-boiler ne-heater yamanzi endlini yakhe ibingafakwanga kahle. Lokhu kuholele ekuvuthweni okuncane kwe-carbon monoxide.
Ngiyaqhubeka nokusakaza izwi. Angifuni ngibone umuntu ephila lokho okwenziwe ngumndeni wami nami engiphile ngakho. Izimpawu zami bezingagcini kulezo zomkhuhlane. Ngilwa nokuthuthumela, ukwehluleka, ukusikeka kwesisu, imisebe yomlenze, akukho ukuxhumana noma ibhalansi, inkumbulo yami yahluleka, futhi ngangizizwa njalo njengenkungu Udidekile, uyisiyezi, unekhanda elincane, futhi lolu hlu lungaqhubeka izinsuku. Kwakungekhona ukuvuza kwe-carbon monoxide kuphela, kodwa futhi nokuvuza kwegesi yemvelo. Ukuchayeka bobabili kungadala ubuze ... Bona okuningi
Ugesi osobala, onephunga, onedumela lokuba ngumbulali othule, ubemoshe ubuthi kancane uWilson. Ngemuva kokuthi abasebenzi sebexazulule lenkinga, uKathi ubuyile empilweni ejwayelekile futhi manje ujabule, uphilile futhi ugcwele amandla.
Ungawuvikela kanjani umndeni wakho kubuthi be-carbon monoxide
Qiniseka ukuthi uhlelo lwakho lokushisa ekhaya luhlolwa njalo uchwepheshe. Musa ukusebenzisa i-grill yamalahle, i-oveni noma isitofu segesi ukufudumeza.
I-Ralf Geithe / Shutterstock.com
Qaphela izimpawu zokuthi ubuthi be-carbon monoxide, obuhlanganisa isiyezi, isicanucanu, ikhanda, ukukhathala, ukozela nokugabha. Uma lezi zimpawu zenzeka, phuma ngokushesha futhi ushayele igumbi labezimo eziphuthumayo.
Lesi sihloko sivele kuqala FABIOSA.FR
Umqambi wemfashini odumile ubala izinto ezenza abesifazane abadala babukeke
Intombazane emaphandleni: Ungazi kanjani ukuthi owesifazane wakhulela endaweni esemakhaya
I-LIVE Transfer Talk: I-Man United ibopha ishibhile ngentengo encishisiwe yeBruno?
UMengameli we-IFF: "UBonventure Kalou ungummeli kodwa uDrogba uphazamisa ukubalwa kwakhe", uveze umngani osondelene neMeya yaseVavoua
Ukulungiselela i-Fally ipupa i-AccorHotelArena 2020 - VIDEO
EGuinea - UDamantang Camara: "Kufanele sigweme noma yini engadala ukulahleka kwempilo" - JeuneAfrique.com
ISenegal: I-MVNO ISirius Telecom ihlasela Mahhala - JeuneAfrique.com
ABANTU & LIFESTYLE7,694